Sea Games ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် မော်တော်ယာဉ်ဖြင့်ပြသ
Sea Games ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် မော်တော်ယာဉ်ဖြင့်ပြသခဲ့ရာ လမ်းသွားလမ်းလာများမှ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။
( ဓာတ်ပုံ - စိုင်းဇော်/ ဧရာဝတီ )
မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းမှ ကွင်းလယ်ကစားသမား သန်းသန်းထွေး ကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရန် ပွဲကြည့်စင်ပေါ်က ခုန်ချခဲ့သူ ခြေထောက်ကျိုး
( ၂၇ ) ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ အမျိုးသမီးေ
ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ တတိယနေရာလုပွဲအဖြစ် ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၀ ) ရက်
ညနေ ( ၄ ) နာရီ အချိန်က ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့သော မြန်မာအသင်း နဲ့ မလေးရှားအသင်း တို့ ပွဲစဉ် ဒုတိယပိုင်း နာကျင်အချိန်ပိုမှာ သန်းသန်းထွေး ဖြတ်တင်ပေးလိုက်သော ဘောလုံးကို နံပါတ် ( ၂ )
မြင့်မြင့်အေး မှ ပိတ်သွင်းကာ ( ၆ ) ဂိုးမြောက်အနိုင်ဂိုး သွင်းယူပြီးချိန် ပရိသတ်တစ်ဦး ပွဲကြည့်စင်ပေါ်မှ ခုန်ကျခဲ့ကြောင်း သိရပါသည် ။
ပွဲကြည့်စင်ပေါ်မှ ခုန်ချခဲ့သူမှာ အသက် ( ၂၄ ) နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ပြည်ကြီးမျက်ရှင်
ပွဲကြည့်စင်ပေါ်မှ ခုန်ချခဲ့သူမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းမှ ကွင်းလယ်ကစားသမား သန်းသန်းထွေး ကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရန် ပွဲကြည့်စင်ပေါ်က ခုန်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုလိုခုန်ချခဲ့ခြင်းကြောင့် ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ရိုး နှစ်ချောင်းကျိုးသွားကာ အရေးပေါ်
လူနာတင်ကားဖြင့် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကာ ဆေးကုသမှု
Photo by Khine Lynn Soe written by AyeMon YarPyae
and Good See.
ဆက်ဆံရေး မပြေပြစ်သော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို အရေးယူမည်ဟုဆို
ကလေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁
သတင်းမီဒီယာများနှင့် ဖြစ်စေ၊ ပြည်သူများနှင့် ဖြစ်စေ ပြောဆိုဆက်ဆံရာတွင် ပြေပြစ်မှုမရှိသော ပြည်သူ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များကို ထိုက်သင့်သော ပြစ်ဒဏ် များဖြင့် အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကလေးခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ဒုတိယရဲမှူးကြီး သိန်းဝင်းက ပြောကြားသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ကလေးမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော မူးယစ်ဆေးဝါး ဖမ်းဆီးရမိမှု သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မုံရွာဒေသခံ သတင်းထောက် တစ်ဦးက မြို့နယ် ပြည်သူ့ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းသို့ တယ်လီဖုန်း ဖြင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းမှုကို တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိက မချေမငံ ဆက်ဆံသည်ဟု ရဲချုပ်ထံ တိုင်ကြားချက်အရ ကလေး ဒေသခံ သတင်းမီဒီယာများ ရှေ့တွင် ရဲမှူးက ထိုသို့ ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဒီတိုင်းဆို ကျွန်တော်တို့ လူတွေ မှားနေပြီ။ ဒါကို ကျွန်တော်က လက်မခံသလို ကျွန်တော့် အကြီးအကဲ များကလည်း လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ပြည်သူလူထုကို မောက်မောက်မာမာ မပြောသင့်ဘူး။ နောက်ကို ဒီလိုမဖြစ်အောင် တာဝန်ယူပါမယ်” ဟု ၎င်းကဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အများပြည်သူတို့ သိရှိစေရန် မီဒီယာများတွင် ချပြချင်ပါကြောင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းသို့ ဆက်သွယ်ရန် မလွယ်ကူလျှင် မိမိရုံးသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး မချေမငံ ဆက်ဆံကြောင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့လျှင် ထိုက်သင့်သော ပြစ်ဒဏ်ဖြင့် အရေးယူမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
“မှုခင်းသတင်းဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းက အတည်ပြုပေးမှ ရေးရတာ။ ပနံပါတ်တို့၊ ပုဒ်မတို့ လွဲသွားရင် သတင်းထောက်ပဲ နစ်နာတာပါ။ တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းက ပြည်သူကို မပြောနဲ့၊ သတင်းထောက်တွေကို တစ်ခါတလေ ရိုင်းပျစွာ ဆက်ဆံတာတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ရဲချုပ်သိအောင် တိုင်ကြားတာပါ” ဟု ကလေးမြို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်းသို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့သော မုံရွာမြို့ခံ သတင်းထောက်က The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
မေးမြန်းမှုကို ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်း မပြုဘဲ စခန်းသို့ လာရောက်ရန်သာ ပြောကြားပြီး တယ်လီဖုန်းကို မချဘဲ နေခဲ့သဖြင့် မိမိက ငါးမိနစ်ခန့် စောင့်သော်လည်း ပြန်လည် ဆက်သွယ်ခြင်း မရှိကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်သော သတင်းထောက်ကို စခန်းသို့ လာရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပြီး တယ်လီဖုန်းဖြင့် ပြောဆိုရာတွင် တစ်စုံတစ်ရာ အမှားအယွင်း ပါသွားပါက ဖြေကြားသူ၏ တာဝန် ဖြစ်သဖြင့် လွဲမှားမည်ကို စိုးရိမ်ကာ စခန်းသို့ လူကိုယ်တိုင် လာယူစေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါနေ့က တာဝန်ကျသော ရဲအရာရှိ တစ်ဦးက ပြန်လည် ရှင်းပြသည်။
ကလေးမြို့သို့ ရဲချုပ် လာရောက်စဉ် ဧည့်ခံရန်ဟုဆိုကာ လိုင်စင်မဲ့ ယာဉ်ပိုင်ရှင်များထံ ငွေတောင်းသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ဘုရားပွဲတွင် အရက်အတူ သောက်ကာ မိမိယူနီဖောင်းကို အရပ်သား တစ်ဦးအား ဝတ်ဆင်စေသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၊ မူးယစ်ဆေး လုပ်ကိုင်သူများနှင့် ပူးပေါင်းသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် စသည်ဖြင့် စည်းကမ်း ချိုးဖောက်သော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို အရေးယူခဲ့ခြင်းများ ရှိကြောင်း ကလေးခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီး သိန်းဝင်းက ပြောသည်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် သေစေနိုင်သည့် ဝက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ပြည်နယ်ပေါင်း ၂ဝ ထိ ကူးစက်ပျံ့နှံ့
ဝါရှင်တန် ဒီဇင်ဘာ ၂၂
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် သေစေနိုင်သော ဝက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး တစ်မျိုး ကူးစက်မှု ပျံ့နှံ့လျက်ရှိပြီး ယခုအခါတွင် အဆိုပါ ရောဂါပိုး ကူးစက်မှုသည် ပြည်နယ်ပေါင်း ၂ဝ ထိ ပျံ့နှံ့လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် စိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီးဌာနက ယခု သီတင်းပတ်အတွင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။
The Porcine Epidermic Diarrhera Virus(PEDv) အမည်ရှိ အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး တစ်မျိုး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် ကူးစက် ပျံ့နှံ့မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေစဉ်တွင် မြောက်အမေရိက နိုင်ငံများတွင် ယင်းကဲ့သို့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် ကူးစက် ပျံ့နှံ့လျက် ရှိသောကြောင့် ၎င်းနိုင်ငံ ရှိ ဝက်ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းများ သည် လာမည့် နွေဦးနှင့် နွေရာသီကာလများ၌ သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားမည်ကို စိုးရိမ်ပူပန်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
PEDv ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံရသည့် ဝက်များသည် ဝမ်းသွား ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်းနှင့် ရေဓာတ် ခန်းခြောက်ခြင်းများကို ခံစားရပြီး ၎င်းရောဂါပိုးသည် အရွယ်ရောက်ပြီး ဝက်များကို သေစေနိုင်ခြင်း မရှိသော်လည်း ဝက်ပေါက်လေးများကို သေစေနိုင်ကြောင်း ကူးစက်ရောဂါ ပြန့်ပွားခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်ဌာနမှ ရောဂါဗေဒ ပညာရှင်များက လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် ဝက်မွေးမြူရေး ခြံများမှ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရသည့် ဝက်ပေါက်လေးများ သေဆုံးမှုသည် ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိလာပြီဖြစ်ပြီး ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်း အထိ မြင့်တက်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း တိရစ္ဆာန် ဆရာဝန်များနှင့် သိပ္ပံပညာရှင် များ၏ လေ့လာချက်များ အရ သိရသည်။
ဖလော်ရီဒါသားတစ်ဦး မိကျောင်းနှင့် ဘီယာလဲသောက်၍ ထောင်ကျဖွယ်ရှိ
တယ်လာဆီ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဖလော်ရီဒါသား တစ်ဦးဟာ လေးပေလောက်ရှိတဲ့ မိကျောင်း တစ်ကောင်နဲ့ ဘီယာဘူးတွေကိုလဲဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့် သားရိုင်းတိရစ္ဆာန် ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှု တားမြစ်ထားတဲ့ ပြည်နယ်ဥပဒေနဲ့ ထောင်ကျဖွယ် ရှိတယ်လို့ Sky news သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဖာနန်ဒိုအဂူလီယာလို့ အမည်ရတဲ့ ဒီဖလော်ရီဒါ နယ်သားဟာ မိကျောင်း တစ်ကောင်အတွက် ၎င်းဟာ မီယာမီ စတိုးဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ ဘီယာ ၁၂ ဖာ တောင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖာနန်ဒိုအဂူလီယာဟာ အနီးအနားက ပန်းခြံတစ်ခုထဲမှာ မိကျောင်းကို ထုပ်ပိုးပြီး ထားခဲ့တယ်လို့ ဖလော်ရီဒါသား ငါးနဲ့ သားရိုင်းတိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး အရာရှိ ဂျော့ပီနိုက ဒေသခံ မီဒီယာများကို ပြောကြားခဲ့သည်။
စတိုးဆိုင်စာရေးက ဆိုင်ထဲကို မိကျောင်းကိုတုပ်ပြီး သယ်လာသူကို တွေ့ရှိပြီးနောက် အာဏာပိုင်ကို အကြောင်းကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေအရ ယင်းပြစ်မှု ကျူးလွန်သူသည် ထောင်ဒဏ် ခြောက်လနှင့် ငွေဒဏ် ဒေါ်လာ ၅၀၀ အထိ ကျခံရစေနိုင်သည်။
မိကျောင်းမှာ ဒဏ်ရာ တစ်စုံတစ်ရာ ရရှိခြင်းမရှိဘဲ တောထဲသို့ ပြန်လည် စေလွှတ် ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
ဗိုလ်အောင်ကျော် ကျဆုံးခြင်း စိန်ရတုပွဲ ဇာတိမြို့တွင် ကျင်းပ
ဟင်္သာတမြို့တွင် ကျင်းပသော ကျာင်းသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်အောင်ကျော် ကျဆုံးခြင်း ၇၅ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် စိန်ရတုပွဲ
အင်္ဂလိပ်အစိုးရအား အကြမ်းမဖက်သည့်နည်းဖြင့် အာဏာဖီဆန် တော်လှန်ခဲ့သည့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်အောင်ကျော် ကျဆုံးခြင်း ၇၅ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် စိန်ရတုပွဲကို ဗိုလ်အောင်ကျော်၏ ဇာတိဖြစ်သည့် ဟင်္သာတမြို့တွင် ယနေ့ကျင်းပခဲ့သည်။
ဟင်္သာတမြို့တွင် ပထမဦးဆုံး ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည့် ဗိုလ်အောင်ကျော် ကျဆုံးခြင်း အထိမ်းအမှတ်အပွဲကို ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဗဟိုကော်မတီ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဟင်္သာတခရိုင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂက တာဝန်ယူ ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဗိုလ်အောင်ကျော် လွမ်းစေတီတွင် ပန်းခွေချခြင်း၊ ဂုဏ်ပြုကဗျာရှည်များ ရွတ်ဖတ်ခြင်းနှင့် စာပေဟောပြောပွဲများ ကျင်းပခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ ၇၅ နှစ်က ကိုလိုနီနယ်ချဲ့စနစ်ရဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ပညာရေးရယ်။ ဆိုးဝါးတဲ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေကို ကျနော်တို့ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်အောင်ကျော်က ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ တော်လှန်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါကို လက်ရှိ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ အနေနဲ့ ပြန်ပြောင်း သတိရဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ ယုံကြည်တယ်။ သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်၊ သူ့ရဲ့ဇွဲသတ္တိဆိုတဲ့ ကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေကို စံနမူနာယူဖို့ သိမ်းဆည်းထားဖို့ လိုအပ်တယ်။ ဒါကြောင့် နောက်မျိုးဆက်တွေသိရှိအောင် လက်ဆင့်ကမ်းတဲ့အနေနဲ့ ကျင်းပတာပါ” ဟု ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ (ဗ.က.သ) ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ကိုကျော်ကိုကိုက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ “ဗိုလ်အောင်ကျော်ရဲ့ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ တာဝန်ဖြစ်တဲ့ ပညာရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လှုပ်ရှားမှု၊ု နိုင်ငံရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကို ကျနော်တို့တွေက ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ သန္နိဌာန်ချတဲ့အနေနဲ့ ပွဲကို ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဗိုလ်အောင်ကျော်သည် ၁၉၃၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရအား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြရင်း မြင်းစီးပုလိပ်များ၏ ရိုက်နှက်မှုကြောင့် ကျဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂနှင့် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂတို့တွင် အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူ ဗိုလ်အောင်ကျော်သည် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် ပထမဆုံး အသက်စတေးခဲ့သော တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား အာဇာနည်တဦး ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်အောင်ကျော် စိန်ရတုပွဲ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် င်္ဟသာတမြို့ ဦးအောင်မြတ်ကျော် ခန်းမတွင် စာပေဟောပြောပွဲတရပ် ယမန်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ စာရေးဆရာမ နှင်းပန်းအိမ်နှင့် စာရေးဆရာ ဦးခမ်းဝင်းတို့က ဟောပြောခဲ့ကြသည်။
ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ဗိုလ်အောင်ကျော်၏ မွေးရပ်ဇာတိရွာဖြစ်သည့် ဟင်္သာတမြို့ မယ်ဇလီကုန်းကျေးရွာတွင် တည်ထားသည့် ဗိုလ်အောင်ကျော် လွမ်းစေတီတွင် ဗကသ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ ခရိုင်ကျောင်းသား သမဂ္ဂများနှင့် ဟင်္သာတမြို့မှ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းများက လွမ်းသူ့ပန်းခွေချခြင်း၊ သ၀ဏ်လွှာများ ဖတ်ကြားခြင်းနှင့် ကဗျာရှည်များ ရွတ်ဖတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ဗိုလ်အောင်ကျော် ကျဆုံးခြင်း စိန်ရတုပွဲသို့ တောင်ငူခရိုင်၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်နှင့် အခြေခံကျောင်းများ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတို့က သ၀ဏ်လွှာများပေးပို့ခဲ့ကြပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ တာဝန်ခံများက ဗိုလ်အောင်ကျော်လွမ်းစေတီတွင် ဖတ်ကြားခဲ့ကြသည်။
နောင်တွင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်အောင်ကျော်ဖြစ်လာမည့် ကိုအောင်ကျော်ကို ၁၉၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် အဖဦးကျော်ထင်နှင့် အမိဒေါ်ရွှေကျော့တို့မှ အင်္ဂပူမြို့နယ် ရုံးဇင်ရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။
အလယ်တန်းပညာကို ဟင်္သာတမြို့နယ် မယ်ဇလီကုန်း အမျိုးသားကျောင်းမှ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး၊ အထက်တန်းပညာကို ဟင်္သာတမြို့တွင် သင်ကြားအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရန်ကုန်မြိုရှိ ဂျပ်ဆင်ကောလိပ်တွင် ဥပစာတန်း တက်ရောက်နေစဉ် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုများ၌ ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
သခင်အောင်ဆန်း၊ သခင်နုတို့နှင့် ခေတ်ပြိုင် ကျောင်းသားဖြစ်သည့် ဗိုလ်အောင်ကျော်သည် အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ် ပြင်းထန်သူတဦးဖြစ်ပြီး မြန်မာစာပေ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို လေးစားတန်ဖိုး ထားသူတဦးလည်း ဖြစ်သည်။
၁၃၀၀ ပြည့် ရေနံမြေသပိတ်ကြီးတွင် သခင်ဘိုးလှကြီး ဦးဆောင်၍ သပိတ်တပ်သားများက ရန်ကုန်မြို့သို့ ချီတက်လာခဲ့ရာ ဒေါက်တာဘမော်နှင့် ဘုရင်ခံ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က ယင်းလုပ်ရပ်ကို ရှုတ်ချလိုက်ပြီး အင်္ဂလိပ်အစိုးရက သပိတ်တပ်အာ ဖြိုခွင်းမည်ဟု သတင်းရသည့်အတွက် ဗ.က.သ အဖွဲ့က သပိတ်တပ်ကြီးနှင့် ပူးပေါင်းရန် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဗဟိန်းနှင့် ကိုဗဆွေတို့ကို မကွေးမြို့သို့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။
ဗ.က.သ က စေလွှတ်ခဲ့သည့် ကိုဗဟိန်းနှင့် ကိုဗဆွေတို့အား အင်္ဂလိပ်အစိုးရက ၁၉၃၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် မကွေးမြို့၌ ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ဗ.က.သ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များက အင်္ဂလိပ်အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေးပင် မနေရာဖြစ်သည့် အတွင်းဝန်ရုံးအား ပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ထို့ကြောင့် ၁၉၃၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်အောင်ကျော် အပါအ၀င် ကျောင်းသားပေါင်း ၇၀၀၀ ကျော်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ အတွင်းဝန်ရုံးအား ၀ိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြပြီး အပြန်တွင် ဂေါ်ရာမြင်းစီးပုလိပ်များ၏ ရိုက်နှက်မှုကြောင့် ဗိုလ်အောင်ကျော် ဒဏ်ရာအပြင်းအထန် ရရှိခဲ့ပြီး ယင်းဒဏ်ရာဖြင့်ပင် တက္ကသိုလ်ဆေးရုံး၌ ကျဆုံးခဲ့သည်။
ဗိုလ်အောင်ကျော် ကျဆုံးမှုသတင်းမှာ တနိုင်ငံလုံးသို့ ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီး ယင်းအား အကြောင်းပြု၍ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိ ကျောင်းများက အင်္ဂလိပ်အစိုးရအား ၀ိုင်းဝန်းသပိတ်မှောက်ခဲ့ကြသည်။
ဗိုလ်အောင်ကျော်၏ ဈာပနကိုလည်း လူထောင်ပေါင်းများစွာ လိုက်လံပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး လူအများ၏ ထောက်ခံမှုဖြင့် ဗိုလ်အောင်ကျော်အား “နေမျိုး သီဟသူရ ဗိုလ်အောင်ကျော်” ဟူသောဘွဲ့ ပေးအပ်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသည်။
စစ်မြေပြင်တွင် တွေ့ရသော ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) တပ်သား နှစ်ဦး (ဓာတ်ပုံ – Steve Tickner / ဧရာဝတီ)
ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်(KIA)က ဖမ်းဆီးထားသည့် ရှမ်း တိုင်းရင်းသား လူငယ်များ ပြန်လည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ယနေ့ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်မည့် အစီအစဉ်ကို မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ ၀န်းသို ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွင်း ပြောင်းရွှေ့ပြုလုပ်ကြောင်း သိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ KIA ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အဖွဲ့ရုံး ရှေ့တွင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရန် မူလက စီစဉ်ထားခြင်း ဖြစ် သည်။
KIA ရုံးရှေ့သို့ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်မည့် အစီအစဉ်ကို အစိုးရ အာဏာပိုင်များက ဆီးဂိမ်း ကျင်းပနေသော အချိန်တွင် တနိုင်ငံလုံး အရေးပေါ်ကာလ သတ်မှတ်ထားသည့် အတွက် ခွင့်မပြုကြောင်း တရားဝင် စာပို့ထား၍ အစီအစဉ်ပြောင်းရခြင်း ဖြစ်သည် ဟု ရှမ်းမျိုးနွယ်စု ရေးရာ အဖွဲ့မှ နာယက ဦးစိုင်းသာဇုံ က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ဒါကြောင့် လမ်းမကြီး တလျှောက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ဖို့ မလုပ်တော့ဘူး၊ ၀န်သို ကျောင်းတိုက်ထဲမှာပဲ လူထုညီလာခံ ဟောပြောပွဲနဲ့ အစည်းအဝေး တရပ်ပြုလုပ် လိုက်တယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ကချင်ပြည်နယ် အနှံ့ရှိ တခြားသော တိုင်းရင်းသားများကို KIA တပ်ဖွဲ့များက အဓမ္မ တပ်သားစုဆောင်းခြင်း၊ ဆက်ကြေး ကောက်ခံခြင်း စသည့် လူအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခြင်းတို့ကို ဆန့်ကျင်သည့် အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဦးစိုင်းသာဇုံ က ဆက်ပြောသည်။
“ရသင့်ရထိုက် လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးကို ဥပဒေ ဘောင်အတွင်းကနေ လုပ်တာပါ၊ ဥပဒေကို ဆန့်ကျင် ပြီးတော့မလုပ် ချင်လို့၊ ဥပေဒကိုဆန့်ကျင်ပြီး လုပ်တယ်ဆိုတာ ယဉ်ကျေးမှုမရှိတဲ့ လူတွေရဲ့ အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ခံယူထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့ မလုပ်လိုက်ပါဘူး၊ ဥပေဒေ ဘောင်အတွင်းကပဲ လုပ်လိုက်တာပါ”ဟု ၎င်းက ဆက်လက် ရှင်းပြသည်။
ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူများက ၎င်းတို့၏ ခံစားချက်များ အပါအ၀င် ဖမ်းဆီးထားသည့် လူငယ်များကို အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးရေး စသည့် ဆိုင်းဘုတ်များ ကိုင်ဆောင်၍ ကျောင်းဝင်းအတွင်း၌ပင် ကြွေးကြော် ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆန္ဒဖော်ထုတ် ပွဲသို့ တက်ရောက်လာသူဦးရေ ထောင်ချီ ရှိကြောင်း ဦးစိုင်းသာဇုံက ဆိုသည်။
“လူထုကို နှိပ်စက်နေတဲ့ KIA ရဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရှုတ်ချတဲ့ပွဲကို တောင်းဆိုထားတဲ့ ကျနော်တို့ကို ခွင့်မပြုဘူးဆိုတော့ ကျနော် တို့ ရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ခံစားလိုက်ရတယ်”ဟုလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
ဒီဇင်ဘာလဆန်း ၄ ရက်နေ့ မှ စတင်၍ ၁၆ ရက်နေ့အထိ ဗန်းမော်ခရိုင် မံစီမြို့နယ်အတွင်းရှိ မံဖွ နှင့် မန်ဝင်းလေ ကျေးရွာ အပါ အ၀င် ရွာပေါင်း ၁၄ ရွာမှ ဒေသခံလူ ၈၀ ခန့်ကို KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များက လူငယ်ဒေသခံများကို တောင်ယာထဲတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ် ဖမ်းဆီးခြင်း ဖြစ်ပြီး အသက် ၁၈ နှစ်အောက် လူငယ် အများဆုံး ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
နောက်ဆုံးရရှိထားသည့် သတင်းများအရ KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဖမ်းဆီးထားသည့် ဒေသခံ ၃၂ ဦး မံစီမြို့နယ်သို့ ပြန်ရောက်နေပြီ ဖြစ် ကြောင်း၊ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသူများ အနေနှင့် ပိုက်ဆံပေးဆောင်ရခြင်း ရှိမရှိ မသိရသေးကြောင်း ဦးစိုင်းသာဇုံက ပြော သည်။
“ကျနော်တို့ မတောင်းဆိုဘဲနဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးခြင်း မရှိပါဘူး၊ တချို့ကလည်း ပိုက်ဆံ ၁၅ သိန်း ပေးခဲ့ရတယ်၊ တချို့မပေးခဲ့ရဘူးလို့ ကြားပါတယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဖမ်းဆီးခံရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့က နိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် KIA ခေါင်းဆောင်များ ထံ ပေးပို့ထားသည့်စာတွင် KIA အဖွဲ့သည် ရှမ်းမျိုးနွယ်စုများအား လက်နက် အားကိုး အနိုင်ကျင့်မှုများ ရပ်တန်းက ရပ်ရန်နှင့် ဖမ်းဆီးခံ ရသူများကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ ဆက်လက်ကျူးလွန်သော အနိုင်ကျင့်မှုများကြောင့် လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်ကြီးထွားလာပါက အဓိက တရားခံသည် KIAအဖွဲ့သာ ဖြစ်သည်ဟုလည်း ၎င်းစာတွင် ပါရှိသည်။
၁၉၉၇ ခုနှစ် နွေရာသီတွင် အထင်ကရ ဂျပန်သတင်းစာကြီးတစောင်က ကျနော့်ကို မေးခွန်းတခု မေးသည်။ “၂၀ ရာစုတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော မည်သည့်ဖြစ်ရပ်ကို ကျနော့်အနေဖြင့် အရေးအကြီးဆုံးဟု သဘောရသနည်း” ဆိုသော မေးခွန်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကာလအတွင်းမှာ ကြီးကျယ် လေးနက်သောဖြစ်ရပ်များ အမြောက်အမြား ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောကြောင့် ယခုအမေးသည် ထူးထူးခြားခြား အတွေးကို လှုံ့ဆွပေးသည့် မေးခွန်းတပုဒ်ပဲဟု ကျနော် နားလည်လိုက်သည်။
ဥရောပ အင်ပါယာကြီးတွေ နိဂုံးချုပ်သွားခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ၁၉ ရာစုတွင် လွှမ်းမိုးကြီးစိုးခဲ့သော အင်္ဂလိပ်နှင့် ပြင်သစ် အင်ပါယာကြီးများ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာစစ်ကြီး နှစ်ခုကို ကျနော် မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြုံခဲ့ရသည်။ ဖက်ဆစ်ဝါဒနှင့် နာဇီဝါဒတို့၏ နေထွက်ချိန်ကိုရော၊ နေ၀င်ချိန်ကိုပါ ကျနော်တို့ မြင်ခဲ့ရသည်။ ဒီရာစုအနေဖြင့် ကွန်မြူနစ်ဝါဒ ပေါ်ထွန်းလာမှု၊ (ယခင် ဆိုဗီယက်အုပ်စုတွင်) ၄င်း၏ ကျဆုံးခန်းနှင့် (တရုတ်နိုင်ငံတွင်) ဤ၀ါဒအပေါ် အရင်းအမြစ်ကျကျ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ပုံများကိုလည်း မြင်တွေ့ခဲ့ကြရသည်။
အနောက်အုပ်စု ကြီးစိုးသော စီးပွားရေးကနေ ဂျပန်၊ အရှေ့နှင့် အရှေ့အာရှ နိုင်ငံများက ပိုမို ကြီးစိုး ခြယ်လှယ်လာနိုင်သော စီးပွာရေးချိန်ခွင်သစ်ဆီ အရွေ့ကိုလည်း ကျနော်တို့ မြင်ခဲ့ရသည်။ ယခုအချိန်တွင် အဆိုပါဒေသများအနေဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတချို့ကို ပြန်လည် တည့်မတ်ဖြေရှင်း နေရသည့်တိုင်၊ ဆယ်စုနှစ်များစွာနှင့်ချီ၍ (ဂျပန်နိုင်ငံ အနေဖြင့် ဆိုပါက ရာစုနှစ်တစ်ခုလုံး နီးပါး) ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးချိန်ခွင်လျှာ အရွေ့ကိုတော့ ဤအရာများက ချေဖျက်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။
ဤသို့ဖြင့် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၀၀ သည် အရေးကြီးသော အဖြစ်အပျက်များနှင့် ကင်းကွာနေခဲ့သည်ဟူ၍ မရှိပေ။
သို့နှင့်တိုင် ၂၀ ရာစုတွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော များပြားလှသည့် အသစ်ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှု အမျိုးမျိုးထဲမှ ဒီမိုကရေစီစနစ် ပေါ်ထွန်းလာခြင်းကို ဤကာလ၏ ပြိုင်ဘက်ကင်းသော အသစ်ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်လာမှု တခုအဖြစ် အဆုံးသတ် ရွေးချယ်ရာတွင် ကျနော့်အနေဖြင့် အခက်အခဲ တစုံတရာ မရှိခဲ့ပေ။ ဤသို့ဆို၍ တခြားသော ကြုံကြိုက်ဖြစ်ပျက် ခဲ့ရမှုများသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်ဟု ဆိုခြင်းအပေါ် ငြင်းပယ်ခြင်း မဟုတ်ပေ။ သို့တိုင်အောင် အလှမ်းကွာလှသော အနာဂတ်ကာလတခု၌ ဤရာစုတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များကို လူသားတို့အနေဖြင့် ပြန်လည် တွေးတောကြည့်သည့်အခါ ထူးထူးခြားခြား လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာ အုပ်စိုးမှုပုံစံတရပ်အဖြစ် ဒီမိုကရေစီစနစ် ပေါ်ထွက်လာခြင်းကို ထိပ်ဆုံးက နေရာမပေးရေးအတွက် သဘောတူညီမှု ရဖို့တော့ အခက်အခဲ တွေ့လိမ့်မည်ဆိုသည်ကို ကျနော့်အနေဖြင့် စောဒကတက်ရပါလိမ့်မည်။
တကယ်တော့ ဒီမိုကရေစီဟူသည့် သဘောတရားသည် လွန်ခဲ့သော ထောင်စုနှစ်ခု ကျော်လောက်က ရှေးခေတ်ဟောင်း ဂရိတွင် စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယအပါအ၀င် တခြားသော နေရာများတွင်လည်း ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားလာစေရေးအတွက် ဟိုတစဒီတစ အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ သို့နှင့်တိုင် ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားများ ယိမ်းယိုင်ပြိုကျသွားက၊ ပို၍အာဏာရှင်ဆန်သော အချိုးမညီသည့် အစိုးရပုံစံများနှင့် အစားထိုးမလာခင်အထိ ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားများ ရုပ်လုံးပေါ်လာပြီး လေးလေးနက်နက် ခံယူကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်မှာ ရှေးခေတ်ဟောင်း ဂရိနိုင်ငံတွင်သာ ဖြစ်သည် (သို့သော်ငြားလည်း အကန့်အသတ် အတိုင်းအတာအတွင်းမှာသာ ဖြစ်ပါသည်)။ နောက်ထပ် မည်သည့်နေရာတွင်မှ တခြားပုံစံအမျိုးအစားများ မရှိခဲ့ပေ။
ထို့နောက်တွင်မူ သိကြသည့်အတိုင်း ဒီမိုကရေစီ ပေါ်ထွန်းလာရန် ကာလရှည်ကြာ အချိန်ယူခဲ့ကြရပါသည်။ လက်တွေ့ ကျင့်သုံးနိုင်သော အုပ်ချုပ်မှုစနစ် ပုံစံတရပ်အနေဖြင့် တဖြည်းဖြည်း အဆုံးတိုင် အောင်ပွဲခံ ပေါ်ထွန်းလာမှုအပေါ် အသစ် ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှု အမြောက်အမြားက အထောက်အပံ့ပြုခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ အသစ်ဖြစ်ထွန်း တိုးတက်မှုများတွင် ၁၂၁၅ ခုနှစ် မဂ္ဂနာကာတာစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမှသည် ၁၈ ရာစုတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပြင်သစ်နှင့် အမေရိကန်မှ တော်လှန်ရေးများ၊ ၁၉ ရာစုမှာ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိကတွင် မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ကို ချဲ့ထွင်နိုင်ခဲ့ခြင်းများအထိ ပါဝင်သည်။ သို့သော် ၂၀ ရာစုတွင်မူ ဥရောပ၊ အမေရိက၊ အာရှ၊ အာဖရိက ဘယ်ဒေသမှ မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆို ကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည့် ပုံမှန် အုပ်ချုပ်မှုပုံစံတခုအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီသဘောတရားသည် နေသားတကျ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
လောကလုံးဆိုင်ရာ ကတိက၀တ် တခုအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားသည် အတော်လေး အသစ်အဆန်းဖြစ်နေပြီး ၂၀ ရာစု၏ အနှစ်သာရရှိရှိ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သော ထွက်ကုန်တခု ဖြစ်ပါသည်။ မဂ္ဂနာကာတာစာချုပ် မှတဆင့် အင်္ဂလန်ပြည့်ရှင်ဘုရင်ကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အာဏာဖီဆန်သူများသည် ဒေသတခုလုံးအနေဖြင့် လိုအပ်ချက်ကို သိမြင်ခဲ့သည်။ မတူကွဲပြားသည်မှာ လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်သူ အမေရိကန်များနှင့် ပြင်သစ် တော်လှန်ရေးသမားများ အနေဖြင့် အများနှင့်ဆိုင်သော စနစ်တစ်ရပ်အဖြစ် ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားလိုအပ်မှုကို သိမြင်နားလည်လာရေးတွင် ကြီးကြီးမားမား ပါဝင် ဖြည့်ဆည်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့နှင့်တိုင် ၄င်းတို့၏ လက်တွေ့တောင်းဆိုမှုများသည် ဒေသတွင်းအနေဖြင့်သာ ရှိနေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တကယ့်လက်တွေ့အားဖြင့် မြောက်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၏ ဟိုဘက်သည်ဘက် နယ်နိမိတ် အကန့်အသတ်အတွင်းမှာသာ ရှ်ိနေခဲ့ပြီး အဆိုပါဒေသ၏ ထူးခြားသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ သမိုင်းအပေါ်တွင်သာ အခြေခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၁၉ ရာစုတလျှောက်လုံးတွင် ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားပညာရှင်များအဖို့ နိုင်ငံတနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) တခြားတနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီနှင့် သင့်လျော်ခြင်း ရှိ/မရှိအပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြခြင်းကို အတော်လေး သဘာဝ ကျသည်ဟု သိမြင်နားလည်ခဲ့ကြသည်။ ၂၀ ရာစုရောက်မှသာ ထိုသို့ မေးခွန်းထုတ်ခြင်း ကိုယ်နှိုက်က မှားယွင်းနေကြောင်း သိမှတ် လက်ခံလာကြပြီး ယင်းသို့ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံကို ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့သည်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်ဆိုတာမျိုး အဆုံးအဖြတ်ပေးရန် မလိုဘဲ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှတဆင့် တည့်မတ် ကောင်းမွန်လာစေရမည်သာ ဖြစ်သည်။ တကယ်စင်စစ် ဤသို့ စဉ်းစားတွေးခေါ်လာခြင်းမှာ အလွန်အရေးပါသော အပြောင်းအလဲတရပ် ဖြစ်ခဲ့ပြီး မတူညီသော ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်းများ၊ ပြောင်းလဲနေသော ၎င်းတို့၏ သမိုင်းအဖြစ်အပျက်များ၊ ယဉ်ကျေးမှုများနှင့် သန်းထောင်ချီသော လူသားတို့အပေါ် လွှမ်းခြုံနိုင်စေရေး၊ ဒီမိုကရေစီ လက်တံကို ရှည်နိုင်သမျှ ရှည်ရှည်ဆန့်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
“အရွယ်ရောက်သူအားလုံး မဲပေးပိုင်ခွင့်” ဟုဆိုခြင်းမှာ အမျိုးသားများ သက်သက်သာမက၊ အမျိုးသမီးများ အပါအ၀င် အားလုံးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်ဆုံးတွင် လက်ခံခဲ့ကြရသည်မှာလည်း ဤရာစုတွင် ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလတွင် ထူးချွန်ထက်မြက်သော အာဂ အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်သည့် ဆွစ်ဇာလန် သမ္မတ ရုသ် ဒရိုင်းဖက်စ် နှင့် ဆုံတွေ့ခွင့်ရသည့်အခါ လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်ခန့်က ဆွစ်အမျိုးသမီးများအဖို့ မဲပေးခွင့်ပင် မရသေးသည်ကို ကျနော့်အနေဖြင့် ပြန်လည် အမှတ်ရမိခဲ့ပါသည်။ လူသားအားလုံး မဲပေးခွင့်ဆိုသည်မှာ ဘာမျှ အဆန်းတကြယ် ဖြစ်မနေဘဲ နေရာတိုင်းတွင် ကျင့်သုံး၍ရသည်ကို နောက်ဆုံးတွင် ကျနော်တို့ သဘောပေါက်လာခဲ့ပါသည်။ ကရုဏာတရား ကဲ့သို့ လူသားအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သဘောပင် ဖြစ်သည်။
ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားများ တလောကလုံး ပျံ့နှံ့စေရေး အဆိုအပေါ် စိန်ခေါ်မှုများရှိသည်ကို ကျနော့်အနေဖြင့် မငြင်းလိုပါ။ အဆိုပါ စိန်ခေါ်မှုများသည် အနေအထားအမျိုးမျိုး၊ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်လာပြီး လားရာအမျိုးမျိုးမှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တကယ်စင်စစ် ၎င်းသည်ပင် စာတမ်း၏ ဆွေးနွေးဖွယ်ရာ တစိတ်တဒေသ ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်သည် အကြွင်းမဲ့ တန်ဖိုးစံတရပ်ဖြစ်သည်ဟူသော အဆိုနှင့် ယင်းအဆိုနှင့် စပ်လျဉ်းသော အငြင်းပွားမှုများကို ကျနော့်အနေဖြင့် ဆန်းစစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့နှင့်တိုင် ထိုဆန်းစစ်မှုကို မစတင်ခင်တွင် ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားသည် ခေတ်ပြိုင်ကမ္ဘာကြီးတွင် သြဇာကြီးမားသော ယုံကြည်မှုတရပ် ဖြစ်နေခဲ့ပြီဆိုသည့် အသိကိုမူ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်ရန် လိုသည်။
မည်သည့်ခေတ်၊ မည်သည့် အခြေအနေတွင်မဆို ကွန်ပြူတာ ပရိုဂရမ်တခု၏ မူလကနဦး အခင်းအကျင်း တရပ်ကဲ့သို့ပင်၊ ယေဘုယျ ထုံးစံတရပ်အနေဖြင့် အလေးထားစရာဟု ထင်ရသော ကျယ်ပြန့်သည့် ယုံကြည်မှုများရှိသည် ယင်းအဆိုများအပေါ် မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို ပျက်ပြယ်စေရန် တိတိကျကျ ငြင်းဆိုနိုင်ခြင်း မရှိပါက ယင်းအဆိုများကို မှန်ကန်သည်ဟုပင် ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြပါသည်။ ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားကို တလောကလုံးက ခံယူကျင့်သုံးနေသည်လည်း မဟုတ်သေး၊ အားလုံး တညီတညွတ်တည်း လက်ခံထားကြခြင်းလည်း မရှိသေးသော်လည်း တကမ္ဘာလုံး၏ ယေဘုယျသဘောထား အမြင်တွင် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အုပ်ချုပ်မှုကို ယေဘုယျအားဖြင့် မှန်ကန်ကောင်းမွန်သည်ဟု လက်ခံနိုင်လောက်သော အဆင့်တစ်ခုသို့ ယခုအချိန်တွင် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားများကို မြောင်းထဲလွှင့်ပစ်လိုသူများ အနေဖြင့် အဆိုပါငြင်းပယ်မှုအပေါ် အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် ရှင်းပြဆွေးနွေးရမည့် အချိန် ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ဤသည်ပင် သိပ်မကြာခင်ကာလက ပေါ်ထွက်လာခဲ့သော သမိုင်းဝင် အပြောင်းအလဲတရပ် ဖြစ်သည်။ ယခင်က အာရှ သို့မဟုတ် အာဖရိကအတွက် ဒီမိုကရေစီအရေး ထောက်ခံအားပေးသူများ အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ရွေးချယ်စရာမရှိဘဲ မျက်စိစုံမှိတ် လုပ်ခဲ့ကြရသည်။ ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားများ လိုအပ်မှုအပေါ် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ငြင်းပယ်လိုသူများကို ရင်ဆိုင်ငြင်းခုံဆွေးနွေးရန် လုံလောက်သော အကြောင်းပြချက်များ ကျနော်တို့တွင် ရှိနေသေးသည့်တိုင၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် ပတ်သက်သော ယေဘုယျ သဘောထားအမြင်သည် ပြီးခဲ့သည့် ရာစုနှစ်များတွင် ရှိနေခဲ့သော အခြေအနေမှ မည်သို့မည်ပုံ ရွေ့လျားလာပြီဆိုသည်ကို ကျနော်တို့အနေဖြင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မှတ်သားထားရမည်ဖြစ်သည်။ (တောင်အာဖရိက၊ သို့မဟုတ် ကမ္ဘောဒီးယား၊ သို့မဟုတ် ချီလီ) စသည့်စသည့် နိုင်ငံတနိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ၊ မရှိဆိုသည်ကို အကြိမ်တိုင်းတွင် အမြင်သစ်ဖြင့် အသစ်တဖန် ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြနေရန် မလိုပေ။ (၄င်းမှာ ၁၉ ရာစု ရေးသားပို့ချချက်များထဲမှ ထင်ရှားသော မေးခွန်းတခုသာ ဖြစ်ပြီး) ကျနော်တို့အနေဖြင့် ယခုအချိန်တွင် ထိုမေးခွန်းအပေါ် အလေးထားရန် မလိုတော့ပေ။ အကြွင်းမဲ့ တန်ဖိုးစံ တရပ်အဖြစ် လက်ခံထားသည့်လမ်းကြောင်းအတိုင်း ၀င်ဆံ့လာခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတလွှား သင့်လျှော်သော စနစ်တစ်ရပ်အဖြစ် ဒီမိုကရေစီအပေါ် ဤကဲ့သို့ အသိအမှတ်ပြု လက်ခံလာခြင်းသည် အတွေးအခေါ် အရာတွင် အရေးပါသော တော်လှန်ပြောင်းလဲမှု တခု ဖြစ်ပေသည်။ ဤသည်ပင် ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားသည် အကြွင်းမဲ့တန်ဖိုး စံတစ်ရပ်ဖြစ်သလားဟူသော မေးခွန်းအပေါ် ကျနော်တို့ ဆန်းစစ်ရမည် လက်တွေ့အနေအထား ဖြစ်ပေသည်။
ဒီမိုကရေစီစနစ် ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အလုပ်ဖြစ်နေပြီလဲ။ အမေရိကန် သို့မဟုတ် ဗြိတိန် သို့မဟုတ် ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ ဒီမိုကရေစီ၏ အခန်းကဏ္ဍအပေါ် မည်သူကမှ မေးခွန်းထုတ်နေခြင်း မရှိပေ။ သို့တိုင်အောင် ဆင်းရဲသော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အမြောက်အမြားအတွက်မူ အငြင်းပွားစရာ အကြောင်းတရပ်အဖြစ် ရှိနေပါသေးသည်။ ဤအချိန်သည် သမိုင်းမှတ်တမ်းများကို အသေးစိတ် စစ်ဆေးနေရမည့် အချိန်မဟုတ်တော့သည့်တိုင်၊ ကျနော့်အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားများ ကျကျနနအလုပ်ဖြစ်နေပြီဆိုခြင်းကိုမူ ပြောဆိုဆွေးနွေးရပါလိမ့်မည်။
အိန္ဒိယသည် ဤငြင်းခုံမှု၏ အဓိက အရေးပါသော နေရာများထဲက တခုဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများ၏ လွတ်လပ်ရေးကို ငြင်းပယ်ရာတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများ၏ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အုပ်ချုပ်နိုင်မှု စွမ်းရည်အပေါ်တွင် စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိကြောင်း ဖော်ထုတ်ပြောဆိုခဲ့သည်။ တကယ်စင်စစ်၊ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သော ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှာပင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ကစဉ့်ကလျားဖြစ်မှု တချို့နှင့် ကြုံခဲ့ရသည်။ ပွဲမတိုးဖူးသေးသည့် အစမ်းသပ်ခံအစိုးရ၊မကျေလည်သေးသော နယ်မြေပိုင်းခြားမှုပြဿနာ၊ ကျယ်ပြန့်သော အုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်မှုများ၊ လူမှုရေး မတည်ငြိမ်မှုများနှင့် ရောယှက်နေသည့် ရှင်းလင်းပြတ် သားမှုမရှိသော နိုင်ငံရေးပေါင်းစည်းမှုများ အိန္ဒိယတွင် ရှိနေခဲ့သည်။ စည်းလုံးညီညွတ်ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အုပ်ချုပ်သည့် အိန္ဒိယ၏ အနာဂတ်အပေါ် ယုံကြည်မှုရဖို့ဆိုသည်မှာ အတော်ပင်ခက်ခဲသည်။
သို့နှင့်တိုင် နောင်ရာစု တ၀က်ကျော်ကာလတွင် ထောင်ကျကျ ပြားကျကျနှင့်ပင် အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ ကောင်းကောင်း အလုပ်ဖြစ်နေသော ဒီမိုကရေစီကို အိန္ဒိယမှာ ကျနော်တို့ တွေ့လိုက်ရတော့သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေမူများ အတွင်းမှာ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ မတူကွဲပြားမှုတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းနှင့် ပါလီမန်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ အစိုးရအဖွဲ့များ အနေဖြင့်လည်း ဆင်းလိုက်၊တက်လိုက် ဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ကိုးရို့ကားရား နိုင်ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလှသော မတူညီမှုများကို ဖြစ်သလို ပေါင်းစည်းထားသည့် အိန္ဒိယသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့် အံ့သြဖွယ်ရာ ကောင်းလောက်အောင် လည်ပတ် အလုပ်ဖြစ်နေပြီး ရပ်တည်ရှင်သန်နေနိုင်ခဲ့သည်။ တကယ်စင်စစ် ၄င်း၏အားကောင်းသော ဒီမိုကရေစီစနစ်ကပင် အားလုံးကို တစည်းတလုံး ဖြစ်စေခဲ့သည်။
အိန္ဒိယသည် မတူညီသော ဘာသာရေး ယုံကြည်မှုများ၊ ကွဲပြားခြားနားသော ဘာသာစကားများနှင့် ဆက်နွှယ်သည့် ကြီးကြီးမားမား စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တကယ်တမ်းတွင် ဘာသာရေးနှင့် လူမျိုးစုမတူ ကွဲပြားမှုများက ဂိုဏ်းဂဏစွဲရှိသော နိုင်ငံရေးသမားများအဖို့ အမြတ်ထုတ်စရာ ပျော့ကွက်တခု ဖြစ်နေပြီး ယင်းတို့ကို (မကြာသေးမီ လပိုင်းများအပါအ၀င်) ကြီးကြီးမားမား အံ့သြတုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးတွင် အသုံးချခဲ့ကြပါသည်။ သို့နှင့်တိုင် ဂိုဏ်းဂဏစွဲ အကြမ်းဖက်မှုများကို စိုးရိမ်ပူပန်မှု များနှင့်ကြိုဆိုခဲ့ပြီး တိုင်းပြည်၏ ဂိုဏ်းဂဏအားလုံးက ဆင်းသက်လာသည့် အဆိုပါ အကြမ်းဖက်မှုများကို ဝေဖန် ရှုတ်ချကြပါသည်။
ထို့ကြောင့်ပင် နောက်ဆုံးတွင် ဂိုဏ်းဂဏစွဲဝါဒ၏ ကျဉ်းမြောင်းသေးသိမ်စွာ အုပ်စုဖွဲ့အကျိုး အမြတ်ရှာလိုခြင်းကို ဆန့်ကျင်သည့် ဒီမိုကရေစီနည်းကျသော တာဝန်ယူ အာမခံမှုကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယကဲ့သို့ ထူးထူးခြားခြား ကွဲပြားခြားနားမှု အမျိုးစုံသော နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ ကြွယ်ဝပြည့်စုံမှုနှင့် ရှင်သန် ရပ်တည်နိုင်မှုအတွက် ဤသည်ပင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အရာတခုဖြစ်ပေသည်။ တကယ်တမ်းတွင် အိန္ဒိယသည် ဟိန္ဒူအများစု အခြေချ နေထိုင်ရုံသာမက၊ ကမ္ဘာတွင် တတိယမြောက် မွတ်ဆလင်အများဆုံးရှိသည့် နိုင်ငံတနိုင်ငံလည်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သန်းပေါင်းများစွာသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များလည်း ရှိပြီ၊ ဆစ်ခ်၊ ဖာရစီနှင့် ဂျိန်းဘာသာဝင်များ အများဆုံး နေထိုင်ရာ နိုင်ငံတနိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။
(အမတြာ ဆင်း (Amartya Sen) ၏ဆာင်းပါး “Democracy asaUniversal Value” ကို Journal of Democracy နှင့် Johns Hopkins University Press တို့၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူပြီး Educational Initiatives (ပညာရှေ့ဆောင်) က ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Educational Initiatives အဖွဲ့ (www.eduinitiatives.org) သည် ဒီမိုကရေစီနှင့် ပတ်သက်သော သင်တန်းများ၊ အရည်အသွေးမြှင့် သင်တန်းများကို ပို့ချပေးနေသော ရန်ကုန်အခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။)
ဗိုဗီနမ်ပြိုင်ပွဲ အမျိုးသမီးအလှပြ ပွဲစဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ နှင်းသီတာ ရွှေတံဆိပ်ဆုရ (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့ ၂၇ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာ အမျိုးသမီး အားကစားသမားတွေက အမျိုးသား အားကစားသမားတွေထက် ပရိသတ်တွေကို စိတ်လှုပ်ရှားစေပြီး ပျော်ရွှင်မှု ပိုပြီး ပေးနိုင်တဲ့ အနေအထားပါ။
အလေးမ၊ လက်ဝှေ့၊ ပြေးခုန်ပစ်၊ တိုက်ကွမ်ဒို၊ ကာရာတေးဒို၊ ခြင်းခတ်၊ ဗိုဗင်နမ်၊ လှေလှော် နဲ့ စစ်တုရင် စတဲ့ အားကစား နည်းတွေမှာလည်း အမျိုးသမီးအားကစားသမား တွေက ရွှေတံဆိပ်ဆုတွေ ရရှိထားကြပါတယ်။
အရင်က အများအားဖြင့် အဲဒီကစားနည်းတွေဆိုတာ အမျိုးသားတွေကသာ စိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီး ယှဉ်ပြိုင်ကြ၊ ဆုရခဲ့ကြတာ များခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရွှေတံဆိပ်ရရှိမှုက ဦးဆောင်နေတာပါ။
ထိုင်းအသင်းကို ခြေကုန်ကန်ပြီး ပယ်နယ်တီနဲ့ ရှုံးပေမယ့် မနေ့ညက ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့ အမျိုးသမီးဘောလုံးပွဲစဉ် တတိယနေရာလုပွဲမှာ မလေးရှားအသင်းနဲ့ ကန်ရာမှာ မြန်မာအမျိုးသမီး အသင်း ရဲ့ ကစားကွက်တွေက မိနစ် ၉၀ လုံး ပရိသတ်တွေအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ကျေနပ်မှုနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုအပြည့်အဝ ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသားလက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်း က အုပ်စုအဆင့်နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပြီးတဲ့အချိန်မှာ အမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်ဘောလုံး အသင်းကို ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု၊ အားပေးမှု နဲ့ မျှော်လင့်ထားမှုတွေက ပိုများလာတာပါ။
ဒါကြောင့် လူမှုကွန်ရက် ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာတွေထက်မှာ အမျိုးသားအသင်းထက် အမျိုးသမီးအသင်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် က ပိုပြီး ကောင်းမွန်နေတာကြောင့် အားပေးသူ အများအပြားရှိလာတဲ့အပြင် ကွင်းလယ်ကစားသမားသန်းသန်းထွေး ရဲ့ ပရိသတ်များ စာမျက်နှာတွေတောင် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဝါရင့်အားကစားကလောင်ရှင် ဦးခင်မောင်ထွေးကလည်း အမျိုးသမီးအားကစားသမားတွေက အမျိုးသားတွေထက်ကို သာသွားတဲ့အခြေအနေကို ရောက်နေပြီလို့ သုံးသပ်ပါတယ်။
“အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေကို ကျော်သွားတာကြာပေါ့၊ ပြေးခုန်ပစ်၊ ရေကူး၊ လက်ဝှေ့ စတာတွေမှာဆိုလည်း အမျိုးသမီးတွေက ရှေ့တန်းရောက်နေပြီ၊ အဓိက ကတော့ အမျိုးသမီးအားကစားသမားတွေက ဆေးလိပ်၊ အရက် စတာတွေ ကင်းအောင်နေကြတာများတော့ သူတို့က ပိုပြီး သာသွားတဲ့အချက်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်”လို့ ဦးခင်မောင်ထွေးက ရှင်းပြပါတယ်။
ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်အသီးသီးက လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကလည်း အမျိုးသားများနည်းတူ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိရေး၊ နိုင်ငံရေးစားပွဲဝိုင်းတွေမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ရရှိရေး စတဲ့ အကြောင်းအရာ အများစုမှာ ပါဝင်ခွင့်ရရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်လာကြသလို အားကစားမှာလည်း အမျိုးသမီးတွေ အောင်မြင်လာကြတာတွေ့ရတော့ ကြက်ဖတွန်မှ မိုးလင်းမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆ မြောင်းထဲရောက်သွားပြီလို့တောင် ပြောရပါတော့မယ်။
“အားကစားသမားတယောက်မှာ ပရိသတ်နဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ပေးဆပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိနေရင် ရာနှုန်းပြည့် မအောင်မြင်ရင်တောင်မှ အထိုက်အလျောက်တော့ အောင်မြင်မှာပါ၊ အမျိုးသမီးအားကစားသမားတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကလည်း အရင်တုန်းကထက် ပိုပြီးတော့ ခိုင်မာလာကြတာကို တွေ့ရတယ်”လို့ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးအသင်းရဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမား မသန်းသန်းထွေးက ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
သူတို့ အသင်းအနေနဲ့ ထိုင်းနဲ့ပွဲစဉ်တုန်းက ဒိုင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တချို့ဟာ အနိုင်ကျင့်နေသလို ခံစားခဲ့ရတာကြောင့် မလေးရှားနဲ့ ပြိုင်ပွဲမှာ အရင်ထက် ပိုပြီး ကြိုးစားခဲ့သလို ယှဉ်ပြိုင်စဉ်အချိန်တွင်းမှာလည်း စက္ကန့်တိုင်း တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကစားခဲ့ကြလို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ပိုပြီးရခဲ့တယ်လို့ မသန်းသန်းထွေးက ဆိုပါတယ်။
အမျိုးသမီး ဘောက်ဆင်လက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲ ၅၇ ကီလိုတန်းမှာ ရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့တာကတော့ အသက် ၁၉ နှစ် အရွယ်ရှိတဲ့ မနွယ်နီဦးဖြစ်ပါတယ်၊ သူက မိသားစု စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့် ကျောင်းပညာရေး ၄ တန်း မှာ ကျောင်းထွက်ခဲ့ရပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ပန်းကန်ဆေး၊ စားပွဲထိုး အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“ကိုယ်က ပညာနဲ့ လုပ်စားလို့မရဘူးဆိုတာ တွေးမိတော့ ဝါသနာပါတဲ့ အားကစားနည်းနဲ့ ထူးချွန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ထားခဲ့တယ်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်ရင်း ရပ်ကွက်လက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲလေးတွေမှာ လိုက်ထိုးတာ ကြာတော့ ဆိုင်ရှင်က ကြည့်မရတော့ဘဲ အလုပ်ထုတ်ပစ်လိုက်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဝါသနာကို သေချာ အကောင်အထည် ဖော်ချင်စိတ်ဖြစ်လာတာပဲ”လို့ မနွယ်နီဦးက ဧရာဝတီကို ပြောပြပါတယ်။
ပြည်တွင်းလက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာသာ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ခဲ့ဖူးခဲ့တဲ့ မနွယ်နီဦးအတွက် ဆီးဂိမ်းမှာ ပါဝင်တဲ့ အမျိုးသမီးဘောက် ဆင်ပြိုင်ပွဲဟာ သူမအတွက် နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲအနေနဲ့ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံလို့ သိရပါတယ်။
သူမက အကြိုဗိုလ်လုပွဲမှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပြိုင်ဘက်ကို အနိုင်ထိုးသတ်နိုင်ခဲ့သလို ဗိုလ်လုပွဲမှာလည်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ပြိုင်ဘက်ကို အနိုင်ရပြီး သူမအတွက် ပထမဆုံး ပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆုံး ရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့တာပါ။
“လက်ဝှေ့ဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ မကိုက်ညီဘူး ထင်တာတွေရှိတော့ ပိုကြိုးစားချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်၊ အမျိုးသားတွေလုပ်တဲ့ အလုပ်မျိုး အမျိုးသမီးတွေလည်း လုပ်နိုင်ပါလားဆိုတာ သိစေချင်တယ်၊ ရုပ်သံတွေမှာလည်း အမျိုးသမီးလက်ဝှေ့ ပြိုင်ပွဲမျိုး ပြစေချင်တယ်”လို့ မနွယ်နီဦးက ဆိုပါတယ်။
ယမင်းကေခိုင်ကလည်း အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိ နိုင်ငံ့လက်ရွေးစင် လူငယ် တိုက်ကွမ်ဒို အားကစားသမားတဦးဖြစ်ပါတယ်၊ သူ ၁၁ နှစ် အရွယ်မှာ စတင်ပြီးတော့ တိုက်ကွမ်ဒို ကစားနည်းကို သင်ယူလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံလက်ရွေးစင် တယောက်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနှစ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာအားကစားပြိုင်ပွဲတခုမှာ ရွှေတံဆိပ်ဆု စတင် ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“အမျိုးသမီးတွေလည်း အမျိုးသားတွေနည်းတူ တန်းတူအခွင့်အရေးတွေရလာပြီ၊ ရင်ဘောင်တန်းလာနိုင်ပြီလို့ ထင်တယ်၊ မိန်းကလေးတယောက်ဆိုပေမယ့် ငယ်ငယ်ကတည်းက ကန်ရ၊ ချရ တာကို ဝါသနာပါခဲ့လို့ တိုက်ကွမ်ဒိုကစားရတာပျော်တယ်၊ အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ကစားကွက်၊ ကစားပုံတွေကအစ အမျိုးသားအသင်းထက်ကို ပိုကောင်းတယ်လို့ မြင်တယ်”လို့ မယမင်းကေခိုင်က ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
ဆီးဂိမ်းစတင်ကျင်းပတဲ့နေ့မှာ ရွှေတံဆိပ်ရရှိခဲ့တဲ့ ခြင်းခတ်အားကစားသမား မဖြူဖြူဝင်းကလည်း ခြင်းခတ်အားကစား နည်းမှာ အမျိုးသမီးဝါသနာရှင်တွေ ရှိနေပေမယ့် မိဘတွေရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရတာကြောင့်နဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့် ခြင်းခတ်ကစားနည်းမှာ အမျိုးသမီးတွေ နည်းနေသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘိုးဘွားရိပ်သာတစ်ခုတွင် တွေ့ ရသော စာလေးတစ်စောင်(ခင်ဗျားတို့အချိန်၁မိနစ်လောက် ပေးပြီးဖတ်ပေးပါဗျာ)
ကြယ်...သီးတပ်တက်အောင်၊ဖိနပ်ကြိုးချည်တက်အောင်၊ဆံပင်ဖြီးတက်အောင်၊ နှာရည်တွေကျရင် သုတ်တက်အောင်၊ တနေ့နေ့ သင်ပေးခဲ့ရတာလေးက အမေ့ အတွက်မမေ့ နိုင်စရာလေးတွေပေါ့။
ခုချိန်မှာ ဒါလေးတွေက အမှတ်ရစရာလေးတွေပေါ့ကွယ်။အဲဒါလေးတွေကို စဉ်စားမိရင် အမေ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ခဏလေး အချိန်နည်းနည်းလေးပေးပါ အမေ ထပ်စဉ်စားပါရစေအုံး။
ဆက်ပြောရမဲ့ စကားများတောင် စဉ်စားမရအောင် မေ့တက်နေပါပြီးသား!
သားငယ်ငယ်က အခေါက် ၁၀၀ လောက် အဆိုလေ့ကျင့်ခဲ့ရတဲ့ ကလေးသီချင်းလေးတပုဒ်ကိုလေ။
အဲဒီသီချင်းလေးတပုဒ်ကို အမေ ခုထိအမှတ်ရနေတုန်းပေါ့ကွယ်။
ညတိုင်းပြောနေကြ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် ၊
တစ်နေ့ တစ်မျိုး မရိုးနိုင်အောင် မေးတက်တဲ့ သားရဲ့မေးခွန်လေးတွေနဲ့ အမေရဲ့တက်သလောက်မှတ်သလောက် ဥာဏ်နဲ့ဖြေခဲ့ရတာလေးတွေကိုလဲ အမှတ်ရနေတုန်းပေါ့။
ခုချိန်မှာတော့ အမေ ကသားငယ်ငယ်တုန်းက ဘဝလေးလို့ ဖြစ်နေပါပြီ။
အခုဆိုရင် အကျီကြယ်သီးတပ်တာ ၊ဖိနပ်ကြိုးချည်တာတောင် ခဏခဏမေ့နေပါတယ်။
အစားစားတဲ့ အခါလဲ အကျီတွေ ညစ်ပတ်ကုန်တယ်၊ ဆံပင်ဖြီးရင်တောင် လက်တွေက တုန်တုန်ရင်ရင် နဲ့ပေါ့။ သား... အမေ ကိုတော့ စိတ်ရှည်ပါကွယ်။
ခုချိန်မှာ အမေအတွက် အလိုအပ်ဆုံးကတော့ သားရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ လက်တစုံပါပဲ။
သား နဲ့တူတူနေရှိနေမယ့် အချိန်လေးတွေ လိုချင်ပါသေးတယ်။
သား....... ခုဆိုရင် မက်တပ်တောင်ကောင်းကောင်းမရပ်နိုင်၊
သားရဲ့နွေးထွေးတဲ့ လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အချိန်ကလေးတွေ ကိုကျော်ဖြတ်ရင်း မကြာမီ ရောက်ရှိလာတေ့ာမဲ့ သေမင်းရဲ့တံခါးဝဆီအထိသို့တဖြည်း...တဖြည်း............ :,(
မိဘဆိုတာ ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်တဲ့ အရာတခုပါ။
မိဘထက် အရေးကြီးတာ မရှိပါဘူး။ ချစ်သူရည်စား မိန်မ ယောင်္ကျား ဆိုတာ အစားထိုးလို့ရတဲ့ အရာတွေပါ။
မိဘဆိုတာကတော့ အစားထိုးလို့မရနိုင်သလို ဘယ်တော့မှလဲ ပြန်မရနိုင်မဲ့ အရာပါ။
မိဘတွေ မရှိတော့မှ ဝမ်းနည်းပူဆွေးတမ်းတနေမယ့် အတူတူ မိဘ တွေရှိနေစဉ် စောင့်ရှောက်ဖို့ မိဘကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားနိုင်ဖို့ မမေ့လျှော့ပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံမှာ သူပုန်တွေ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ဒေသမှာထဲရှိနေတဲ့ အမေရိကန်လူမျိုးတွေကို ကယ်တင်ဖို့သွားတဲ့ အမေရိကန် လေယာဉ်တွေကို အမည်မသိသေနတ်သမားတွေ ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ အမေရိကန်စစ်တပ်က ပြောပါတယ်။
စစ်တပ်အမှုထမ်း ၄ ယောက် ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ Pentagon စစ်ဌာနချုပ်က ပြောပါတယ်။ Juba မြို့တော် မြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ Bor မြို့က အမေရိကန်တွေ ကို စနေနေ့က အမေရိကန်တပ်တွေ သွားကယ်ဖို့ ကြိုးစားစဉ်မှာ ခုလို တိုက်ခိုက်ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက် ကယ်ဆယ်ရေး အစီအစဉ်ကို ဖျက်ခဲ့ပြီး လေယာဉ် ၃ စင်းလုံး အိမ်နီးချင်း Uganda နိုင်ငံကို လမ်းလွှဲသွားခဲ့ရပါတယ်။
အမေရိကန်စစ်မှုထမ်းတွေနဲ့ အမေရိကန်သံရုံးကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် အဲဒီ ဒေသကို စစ်မှုထမ်း ၄၅ ယောက်ကို သမ္မတ Barack Obama က ကြာသပတေးနေ့က စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ တောင်ဆူဒန်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အမေရိကန်လူမျိုးတွေကို ကယ်တင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်း အိမ်ဖြူတော်က စနေနေ့မှာ ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာ သမ္မတက အလေးအနက် ပြောထားပြီး အမေရိကန်ရဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး အစီအစဉ်မှာ ဆူဒန်ခေါင်းဆောင်တွေက ကူညီဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
Bor မြို့ကို သူပုန်တွေက သိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့ တောင်ဆူဒန်အစိုးရက ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်ထဲ တောင်ဆူဒန်မှာ အဆိုးဆုံးလို့ ပြောနိုင်တဲ့ တိုက်ပွဲတွေ အဲဒီမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
အလှူငွေမထည့်၍ အိမ်ရှင်ကိုဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းသည့်သံဃာတော် အရေးယူခံရ
နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေ၊ ပျဉ်းမနားမြို့ တွင် အလှူခံမရသဖြင့် သံဃာတော်တစ်ပါးက အိမ်ရှင်ကိုဆဲဆိုကြိမ်မောင်း၍ အရေးယူခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ချောက်မြို့နယ်၊ အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်နေ ဦးကောဝိဒ (၆၉) နှစ်သည် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်ကနေ ပြည်တော်ပျဉ်းမနားရှိ ကင်ပွန်းတန်းကျေးရွာအတွင်း လိုက်လံအလှူခံနေစဉ် အလှူခံမထည့်သောအိမ်ရှင်ကို ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်ကို ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ သာသနာတော်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌကခေါ်ယူစစ်ဆေးရာ ဦးကောဝိဒသည် ၀ိနည်းတော်နှင့် အညီနေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ အလှူခံငွေများလိုက်လံ ခံယူနေကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါသံဃာတော်သည် သာသနာ့ဘောင်အတွင်း ၀င်ရောက်လာသည်မှာ မကြာမြင့်သေးဘဲ ခွင့်မပြုထားသော အလှူငွေကောက်ခံမှု၊ ၀ိနည်းတော်နှင့် အညီ နေထိုင်ခြင်းမရှိမှုနှင့် အလှူခံမထည့်သောအိမ်ရှင်အား ဆဲဆိုကြိမ်းဝါးမှုတို့ ကျူးလွန်၍ ဥပဒေအရအရေးယူပေးပါရန် တိုင်ကြားခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပျဉ်းမနားမြို့မရဲအရေးမပိုင်မှု အမှတ်စဉ် ၄၂/၂၀၁၃ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၂၉၅ (က)(သာသနာညစ်နွမ်းစေမှု) အရ အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ သင်္ကန်းဝတ်ဖြင့် မိမိသဘောအလျောက် လိုက်လံအလှူခံခွင့်အား တားမြစ်ထားသည်ဖြစ်ရာ သင်္ကန်းဝတ်ဖြင့်လိုက်လံ၍ ငွေကြေးများအလှူခံနေသော အလှူခံအဖွဲ့၊ သံဃာတု၊ ကိုရင်အတုများကို လိုက်လံဖမ်းဆီးကာ အရေးယူထားမှုမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ၁၀ မှုခန့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းအရသိရသည်။
အမျိုးသမီးမောင်းနှင်လာသောကား အမြန်လမ်းတွင် တိမ်းမှောက် ကလေးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရ
ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမပေါ်တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးမောင်းနှင်လာသောကားမှာ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲတိမ်းမှောက်ခဲ့၍ ကလေးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းရရှိသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်က ရန်ကုန်မြို့မှ နေပြည်တော်သို့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးမောင်းနှင်လာသော ကိုယ်ပိုင်ကားသည် မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၀ ကြားအရောက်တွင် လမ်းကွေ့ကြောအားကွေ့စဉ် ယာဉ်အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ လမ်းလယ်ကျွန်းတွင် ကာရံထားသောတန်းများကို တိုက်မိခဲ့သည်။
ထို့နောက် လမ်းလယ်ကျွန်းရှိအုတ်ကန်ကို ၀င်တိုက်မိပြီး ယာဉ်ရပ်တန့်သွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ယာဉ်ပေါ်တွင် လိုက်ပါလာသည့် အသက် ၅ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ် နှင့် အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် ကလေးတို့မှာ နှာခေါင်း၊ ရင်ဘတ်နှင့် ဗိုက်တို့တွင် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
““ကားပေါ်မှာတော့ သူရယ်ကလေးနှစ်ယောက်ပဲပါတယ်။ အမြန်လမ်းမှာ ယာဉ်မှောက်တာအမျိုးသားတွေပဲများတယ်။ အမျိုးသမီးမောင်းလို့ ယာဉ်တိမ်းမှောက်တာသိပ်မရှိဘူး”” ဟု အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ယာဉ်ရှေ့ခေါင်းပိုင်းကြေသွားခဲ့ပြီး ကိုယ်ထည်များတွင်လည်းပွန်းပဲ့သွားခဲ့ရာ ငွေကျပ်တန်ဖိုးသိန်း ၂၀ ခန့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယာဉ်မဆင်မခြင် မောင်းနှင်မှုကြောင့် ၎င်းအား အမှတ် (၃)အမြန်လမ်းမရဲစခန်း မှ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၃၃၇ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်ဂိတ် လုံခြုံရေးအရ နေ့တစ်ဝက်ပိတ်မည်
မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်အရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံ လူငယ်များ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မည့် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ယင်းနယ်စပ် ဝင်ပေါက်ဂိတ်ကို လုံခြုံရေးအရ နေ့တစ်ဝက် ပိတ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း တမူးခရိုင် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ဇောလင်းက ပြောကြားသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က ယင်းကော်မတီ အစည်းအဝေး ခန်းမတွင် ပြုလုပ်သော နယ်စပ်အရေး ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံများအား ရှင်းလင်းပွဲတွင် ယင်းကဲ့သို့ ပြောကြားခြင်း ဖြစ်ပြီး လာမည့် ၂၃ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် ခရိုင်အဆင့် အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီမှု မရရှိသေးသော နယ်စပ် နယ်နိမိတ် ကျောက်တိုင် အမှတ် ၇၈ အနီးတွင် စစ်ဆေးရေး ဂိတ်တစ်ခု တည်ဆောက်ရန် အိန္ဒိယ နိုင်ငံဘက်မှ မြေနေရာ ပြုပြင်နေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်ဖက် အစိုးရ ဖြေရှင်းပေးရန်အတွက် တမူးလူငယ် ကွန်ရက်မှ ဦးဆောင်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မည် ဖြစ်ပြီး နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးမှ တမူးမြို့လယ်ရှိ ကဘော်ချိုင့်ဝှမ်း မြို့တော် ဆိုင်းဘုတ်ထိ စီတန်း လှည့်လည်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ကွန်ရက်မှ ဦးယဉ်ကိုဦးက ပြောသည်။
“ဒီဘက်ကနေ ဟိုဘက်ကို အလုပ်သွားလုပ်မယ့် သူတွေ အတွက်တော့ အနည်းငယ် ကသိကအောက် ဖြစ်နိုင်ပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆန္ဒပြချိန်မှာ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ မဖြစ်ဖို့အတွက် ကာကွယ်ထားတဲ့ သဘောပါ” ဟု ဦးကျော်ဇောလင်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားများကို မုန်းတီး၍ မဟုတ်ဘဲ နယ်စပ်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိတို့အပေါ် ၎င်းတို့၏ ဆောင်ရွက်သော မူဝါဒ လုပ်ငန်း သဘောတရားအား လက်မခံလိုသောကြောင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တမူးမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်အောင်က ပြောဆိုသည်။
အနည်းဆုံး လုပ်ခလစာအတွက် လုပ်သားများ၏ တစ်လအသုံးစရိတ် ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ တင်မည်
အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခလစာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရာတွင် အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ ရှိစေရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား သမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (ယာယီ) က သုံးလကြာ ကောက်ယူထားသော လုပ်သားများ၏ တစ်လအသုံးစရိတ် စစ်တမ်းကို နဝမအကြိမ်မြောက် ကျင်းပမည့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်သို့ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်လင်းက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ စစ်တမ်းတွင် လုပ်သားများ၏ တစ်လတာ အသုံးစရိတ်တွင် ပါဝင်သည့် အသား၊ ငါး၊ ဆန်၊ ဆီ စသည့် စားသောက် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ တံမြက်စည်းစသည့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ တစ်ကိုယ်ရေသုံး ပစ္စည်းများနှင့် ကလေး၏ ကျောင်းစရိတ်ကို ထည့်သွင်းထားခြင်း ဖြစ်ပြီး အိမ်ရှိ မိသားစုသုံးဦးအပေါ် မူတည် တွက်ချက်ထားချက်အရ တစ်လအတွင်း အသုံးစရိတ်မှာ ၁၈၂ç၉၁၀ ကျပ် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်မံပြောကြားသည်။
ယခုကဲ့သို့ တွက်ချက်မှုအတိုင်း လုပ်သားများ အပြည့်အဝ မရပါက လုပ်သားများ အနေနှင့် အလုပ်တွင် အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ကိုင်လိုစိတ် နည်းပါးလာပြီး ခိုးဝှက်ခြင်းကဲ့သို့ ကိုယ်ကျင့်တရားများ ပျက်ပြားလာနိုင်ကာ ကလေးငယ်များ အနေနှင့်လည်း ကျောင်းမတက်နိုင်ဘဲ ကလေးလုပ်သား ဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်း ဦးအောင်လင်းက ပြောကြားသည်။
စစ်တမ်း ကောက်ယူထားသည့်အတိုင်း လုပ်သားများကို အဆိုပါ နှုန်းထားအတိုင်း လစာငွေ ပေးအပ်နိုင်ပါက အလုပ်သမားများ အတွက် ကောင်းမွန်ကြောင်း၊ သို့သော် ယခုကဲ့သို့ ပေးအပ်ရန်အတွက် အလုပ်သမားများ၏ အလုပ် လုပ်နိုင်စွမ်းအပေါ် ကြည့်သင့်ကြောင်း၊ အဆိုပါ စစ်တမ်းအရ အလုပ်သမားများတွင် တစ်လလျှင် လစာကျပ်တစ်သိန်း ရှစ်သောင်း ပေးသင့်သူ ရှိသကဲ့သို့ တစ်သိန်းတစ်သောင်း ပေးသင့်သူလည်း ရှိကြောင်း ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်ရှိ စိုက်မျိုးစပါး တင်သွင်းဖြန့်ချိရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သော ASIA DANSITY INTERNA TION SERVICE ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ ဦးထိန်လင်းက ပြောကြားသည်။
လစာနှုန်းထားများအပေါ် ယခုကဲ့သို့ စစ်တမ်း ကောက်ယူပေးသည့် အတွက် ကောင်းမွန်သော်လည်း လုပ်သားများကို ယခုကဲ့သို့ လစာပမာဏ ပေးရန်မှာ အလုပ်ရှင်နှင့် အဆင်မပြေနိုင်ကြောင်း လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်ရှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံ လုပ်သားတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ယင်းစစ်တမ်းကို အောက်တိုဘာလမှ စတင်ကာ သုံးလကြာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ၁၁ ခုမှ မြို့နယ်ပေါင်း ၄၆ မြို့နယ် အတွင်းရှိ လုပ်သား အဖွဲ့အစည်းများမှ တစ်ဆင့် ကုန်ဈေးနှုန်းများ ကောက်ယူခြင်းနှင့် လုပ်သားများထံ မေးမြန်းထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း အသိပေး ဆိုင်းဘုတ်များ ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်မည်
ယာဉ်မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး တစ်လျှောက်တွင် မော်တော်ယာဉ်နှင့် အခြားထိခိုက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ ကြုံတွေ့က တိုင်ကြား အသိပေး၊ အကူအညီ တောင်းခံနိုင်ရန် စိုက်ထူထားသော အသိပေး ဆိုင်းဘုတ်များကို ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်မည် ဖြစ်ကြောင်း အမြန်လမ်း ဒုတိယ အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ အမြန်လမ်းတစ်လျှောက် စိုက်ထူထားသည့် အသိပေး ဆိုင်းဘုတ်ပါ အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီး၏ ဖုန်းနံပါတ်မှာ ခေါ်ဆိုတိုင်း မရခြင်း၊ ပြည်သူအချို့မှာ ဆက်သွယ်ရ ခက်ခဲခြင်းများ ကြုံတွေ့နေရလျက် ရှိရာ ယင်းနှင့် ပတ်သက်၍ The Voice က သီးခြား ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ၎င်းက အထက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
“အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီးက မွန်ပြည်နယ်ဘက် တာဝန် ရွှေ့ပြောင်း သွားပါပြီ။ နောက်အသစ် ရောက်ရှိလာတဲ့ အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီး ဦးကြည်ဇော်မြင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို မကြာခင် အသိပေး ထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်။ နောက်ထပ် ၁၅ ရက်လောက် နေရင်ပေါ့” ဟု ဒုတိယ အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီးက ဆိုသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လက စတင်ဖွင့် လှစ်ခဲ့သော မိုင်ပေါင်း ၃၆၅ ကျော်ရှိ အဆိုပါ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမပေါ်တွင် အရေးပေါ် အကူအညီ တောင်းခံနိုင်သည့် အသိပေးဆိုင်းဘုတ် ၂၅ ခုခန့် စိုက်ထူထားပြီး ယင်းဆိုင်းဘုတ်အားလုံး ပြန်လည် ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်ပေးရန် စီစဉ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကထပ်လောင်း ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း တစ်လျှောက်တွင် ယာဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့် မတော်တဆမှုနှင့် အခြားအကူအညီများ စောင့်ရှောက်မှုပေးမည့် အမြန်လမ်း ရဲစခန်းပေါင်း ၁၅ ခုနှင့် ရဲဝန်ထမ်းပေါင်း ၇၀၀ ကျော်တို့က ၂၄ နာရီ အချိန်ပြည့် တာဝန်ယူထား ပေးကြောင်း ယင်းအမြန်လမ်း ရဲစခန်းများ တာဝန်ခံ ဒုတိယရဲမှူးကြီး နေဝင်းထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။